Izindaba - Ukuphepha emsebenzini kufanele kuqiniswe
Ukuphepha emsebenzini kufanele kuqiniswe
Ekuseni ngo-Okthoba 9, inkampani yabamba umhlangano mayelana nokuphepha komsebenzi ohlelweni ukuze ifingqa ukuphepha komsebenzi kanye nokuvimbela nokulawula ubhubhane engxenyeni yesithathu, ihlaziye isimo samanje sokuphepha nezinkinga ezikhona, futhi ihlele umsebenzi obalulekile wokuvimbela ukuphepha ikota yesine.Imenenja-jikelele u-Zhang, umnyango okhiqiza ukuphepha, ihhovisi, nabaholi babo abakhiqiza ukuphepha kanye nezinhloko zeminyango bathamele umhlangano.
Umphathi Jikelele u-Zhang uzwakalise ukubonga nokuzwelana nabasebenzi bokuphatha ukuphepha kokukhiqizwa kwesistimu ababambelele ezikhundleni zabo, balwela umugqa ongaphambili futhi bavikela ukuphepha ngesikhathi sempi yokuvikela nokulawula ubhubhane ehlobo.Umhlangano uveze ukuthi engxenyeni yesithathu, kwakukhona isimo sezulu esibi kakhulu, ukuqubuka kwe-coronavirus yenoveli kwenzeka ngokuzumayo, zonke izinhlobo zobungozi zazigxilile futhi zanqwabelana, futhi isimo sezokuphepha sasinzima futhi sinzima. Ibhizinisi ngalinye ngobuqotho lisebenzisa izinqumo zenqubomgomo emaphakathi, yesifundazwe, kamasipala, kanye nezidingo zenkampani, ngokuhambisana. namayunithi afanele asezingeni eliphakeme ngesikhathi sasehlobo izinyathelo ezikhethekile eziyikhulu zokuphepha kokukhiqiza kanye nomsebenzi wokuvimbela nokulawula ubhubhane, inhlangano nobuholi, ifemu yokuklwebha, ukuhlolwa kokuqondisa okuqinile, ukuvikela ubungozi, ukubamba kahle, kwenziwe umsebenzi omningi onezithelo, izinhlangothi kufanele, ngemizamo ehlanganyelwe, ukuqinisekisa isimo sokuphepha sokukhiqiza esibushelelezi phakathi nesambamer.
Umhlangano ugcizelele ukuthi ngemuva koSuku Lukazwelonke, esigabeni sokugijima sokuphela konyaka, wonke umsebenzi okuhloswe ngawo “ukulwela izinsuku eziyikhulu, ukusebenzisa okuhlosiwe kwezokuphepha, izimpi ngemuva kwempi, indawo endaweni, kanye nokuphepha kokukhiqiza okubucayi. isimo kanye nezici zokukhiqiza ukuphepha, isizini qiu dong kusengaphambili ukuhlela ngokucophelela ukuthunyelwa, thatha isinyathelo, kufanele ngenkuthalo, Sizosebenzisana ukuze siqinisekise ukuphepha kwekota yesine.
Umhlangano ukubeke kwacaca ukuthi yonke iminyango kufanele ixhumanise umsebenzi wentuthuko nokuphepha, futhi igxile emisebenzini eyisikhombisa ebalulekile engxenyeni yesine: eyokuqala, ukuqinisa uphenyo oluqhubekayo nokulawulwa kwezingcuphe nobungozi obufihliwe kanye nokuphathwa kwezigaba nokulawulwa kwezingozi; ukuqinisa imfundo nokuqeqeshwa kwabasebenzi ekuphepheni kokukhiqiza;Okwesithathu ukusebenzisa izindlela zokuvimbela ekwindla nasebusika (imishini yokuvimbela izifo, ukuvimbela umlilo, amakhaza, okokuqandisa);Okwesine, sizoxhumanisa ukuvimbela nokulawula ubhubhane oluvamile. kanye nokuvikelwa kwemvelo.Okwesihlanu, qinisekisa ngokugcwele umshwalense wesibopho sokukhiqiza ukuphepha;Okwesithupha, ngobuqotho yenzani unyaka omuhle wokuhlola isifinyezo sokuphepha emsebenzini;Okwesikhombisa, funda ngokucophelela futhi uhlele umsebenzi wokuphepha kokukhiqiza ngonyaka ozayo kusengaphambili.
Inhlangano yomhlangano ibuke ifilimu yezemfundo exwayisa ngokukhiqizwa kokuphepha.Amanye amalungu omnyango wokukhiqiza ukuphepha ahambele umhlangano wokukhiqiza ukuphepha ngevidiyo yenethiwekhi.
Isikhathi sokuthumela: Nov-19-2021